ezamehlela Astral Sigcizelela eyinqaba, isinyathelo ezicashile ngesimo sethu sengqondo. Unganakile, wonke umuntu uyaqonda ukuthi kuziwa ulwazi olubalulekile, kodwa hhayi nonke kungaba ukususa ukubhala futhi asebenzise. Sihlaziya nawe, yini iphupho asenge amankomazi. Kungazelelwe, ngoba lendoda wanamuhla? Kodwa izindaba ezinjalo zivamile. Nasi isizathu.
"Ngesisekelo komlando" uzungu
Ngaphambili, izilwane kwakungafanele zithweswe nje yokuletha ukudla ekhaya. Wona, kanye nawo ezweni elinothile uhlobo isiqinisekiso futhi isiqinisekiso sokusinda. Lolu lwazi singene shí ingqondo enganakile, ngomqondo ongokomfanekiso, ikhodi yamandla ezikhungweni zokuphehla abakhileyo emhlabeni. Ngakho-ke, sengibone ephusheni inkomo kanye izakhamuzi abazi lezi zilwane kuphela kusuka izithombe wesakhiwo izinhlelo ze-TV, bese abantu bendawo ababengazi ibeke indlwana futhi ugunda. Isithombe livela izingqimba omdala enganakile elihlobene ne izizukulwane isipiliyoni. Abantu abaqondayo lokhu, wenze ngisho ukungabaza ukuthi uyaphupha ukuba asenge amankomazi. Le ndaba nethemba ngekusasa, adalwe yezandla zabo. Uthi phambi phakathi kwendalo omuhle futhi esebenzayo, ukuchuma-wathola. Ukuqamba amanga embhedeni, noma esithandweni, akunakwenzeka ukubeka empilweni. Yilokhu ngokuhamba kwesikhathi uthi scene ebusuku. Futhi manje mayelana ubuqili kanye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Kungani iphupho zizosengwa izinkomo
Abantu abaye baphila iminyaka eminingi futhi uye zanqwabelana isipiliyoni eside, ngokuqiniseka bagomela ngokuthi umfanekiso enjalo amahle embonweni ebusuku uthembisa inzuzo. ukungabaza Not okuningi! Uma ube nethuba ukubhekana zizosengwa kusezweni imilingo Morpheus - uthole imali. Futhi mkhulu umhlambi - siyoba sikhulu imali. Ngakho-ke, umbuzo othi "? Yini iphupho asenge amankomazi" Can zingaphendulwa ngaphandle kokungabaza - kube kuhle kimi. Phambili phakathi injabulo, ukuthola, zuza, kuqinisekiswa isipiliyoni.
Ukuqaqa umbono wakho kufanele tihambisane izimo zakho zamanje. Ngokwesibonelo, uma namuhla ukhathazeke kakhulu ngesidingo, Ngakho-ke, ingabe kudingeka imali. Lapho isihloko isipiliyoni kwakugcwaliseka kubo ngephupho ezithandwayo zezingoma - ukwaba lemali edingekayo kuso. Nginakekela isimo inkonzo - ngeke, iya ku ukukhula umsebenzi. ubudlelwano Haunted nabantu obathandayo - uthole isipho, okufakazela ubuqotho bakhe futhi ukuqinisela.
Ngokuvamile, lapho ecabanga ukuthi, lokho amaphupho ukuba asenge amankomazi, ulungiselela namarisidi impahla, uyayixazulula inkinga ukuthi haunted muva nje. Nokho, kuphela uma izilwane enempilo, nezimo, futhi ubisi ehlanzekile mningi.
Ubisi iphupho izinkomo ezigulayo
umthombo esinezimpondo ukudla - ezinhle ngaso sonke isikhathi. Kuyinto iqiniso obungenakuphikwa, lapho bonke ziyavuma. Ukuze baphupha inkomo - ukuthola imali noma ezinye impahla engokoqobo. Uma isilwane kwakubonakala ukukulimaza - efunda okwakubhalwe kulowo mbhalo incazelo lamahubo lilingana, kodwa is kwahambisana by umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Uzama ukuthola ubisi kusukela inkomo mafutha - ukuze deplete kulo mthombo ngokulungiswa kwemigwaqo imali. Lokhu kusho ukuthi iholo uzoma ukuze ihlangabezane noma ukubambezeleka, ziyolahlekelwa amaphrimiyamu evamile noma amakhasimende buzoba buncane. Ngaphezu kwalokho, ubuthongo liyancedisana ukufuna eminye imithombo imali. Esikhathini esizayo esiseduze babazi bazizwa yokuntuleka imali, kokuchitha luyokhula noma "ruble ziyokuwa futhi." Bad, uma isilwane ufile lapho zisengwa. Zilungiselele ukulahlekelwa umthombo ezezimali. Kuyomelwe agijime futhi ukusebenza ikhanda ukuze uthole entsha. Lokhu okungekuhle, ngakolunye uhlangothi, iphupho. Ngakolunye - ukhuluma ushintsho, zona ngokwazo kuhle.
Ephusheni, ukuze inkomazi kanye ubisi ukubona
Ngezinye izikhathi into ebaluleke kakhulu sokuqonda umkhiqizo okuholela, hhayi inqubo. Uma iphupho yabhekisela ubisi, kubalulekile ukwakha ku uhlobo yayo kanye nekhwalithi, ukuze aqonde isigijimi enganakile. Ngakho, semali umkhiqizo omhlophe asezingeni elifanele - kwandzisa lwati. Uma ubisi ubukeka bluish (amafutha ongaphakeme), khona-ke wabe ngagculiseki. Ngokwesibonelo, i-premium kuyoba ephansi kakhulu kunalokho ukuthi lapho ezithenjwayo. Bheka amanzi esikhundleni ubisi - konga isikhathi. Esikhundleni abasebenza kanzima, asikho bazitike enkulumweni eyize noma ukungabaza. Lokhu, Yiqiniso, lokho akusho ukuthi iholela empumelelweni. amasi uvela esifubeni wenkomazi kusho ukuthi ukulahlekelwa uthole lapho kulindeleke inzuzo. Nakani umbala umkhiqizo. Ukuze baphupha inkomo ukuthi ukhiqiza ubisi omnyama - zichithe; obomvu - bamangala; yellow - ekulahlekelweni; oluhlaza - ethembeni akanangqondo. By the way, umbala isilwane nakho kubalulekile.
Sizoqhubeka ukuqaqa ezihlukahlukene ukuthi bazalwa abahambi ingqondo. Uma imigwaqo yezwe Morpheus emhlambini izinkomo sihambahamba kukuwe futhi kudinga zisengwa, ukuba bakhulu, ngisho msebenzi omkhulukazi. Uma iphupho wenqaba ukwanelisa isifiso esingokwemvelo kwezilwane - ithawula iphrojekthi nokunenzuzo ngokoqobo. Gwema ukunakekela izinkomo, bacele isikhathi sokungabikho emsebenzini, ngendlela elula, yokuthi ubuvila ekuphileni kwansuku zonke kuphazamisa waqaphela amakhono akho. INdodana ayikwazi ngokuthi ephazamisayo noma okubi. Kunalokho, odlulela lokuthola imfundo amandla abo. Kuyadingeka ukuba ningabi nje kuphela uphumule kodwa futhi ukuba bahlanganyele nokwenziwa kwemisebenzi. Kancane kancane ubona kanjani ngokushintsha inhlalakahle yakho, okwandisa inhlonipho kwabanye. Lokhu kusitshela ncwadi iphupho. umbele inkomazi ukubona ngaphandle isilwane - ukuwina, uma sasigcwele ukuba athululele amathemba inzuzo, kusukela kwathi awunalutho.
Ukuhlasela ngesikhathi zizosengwa
Ngezinye izikhathi, akusiwona imfihlo, izilwane ezisencane abangajabule ukuthi umuntu ufuna ukuba uthole ngobisi lwazo. Bona Butt noma kick enqubeni. Lena ngesakhiwo libonisa ephusheni ukuba isifiso sakho ukuze uthole okuthe xaxa ungathandi abanye. Othile ecabanga ukuthi ukuncisha. Lo muntu ngeke acasuke futhi iyoba isitha sakho. Uma une umhlambi izinkomo butting izimpondo ngesikhathi zizosengwa - uthole ubufakazi bokuthi abantu nomona izimpumelelo impumelelo. Baxoxe sembubhiso yabo nesigayegaye ngemuva, abafisa ukuthola impumelelo efanayo ngasese. Musa unake. Yiqiniso, kubuhlungu, lapho bekhuluma kabi ngawe, kodwa engenayo ayiyona ingozi, umsebenzi abakwazi asuse. inkomo icala - ukuze balwisane nakho. Bekuyoba, ingaphumeleli, uma ungathathi umphefumulo sonya izitha.
Kwakunomunye umuntu owayemiselwe zisengwa inkomo
Buka enchubeni zabasebenzi - ukuhlela imisebenzi yabo. Ngokwesibonelo, uma owesifazane nephupho: "Ndodakazi yami, mina milked inkomo, futhi ngayibona igxumagxuma futhi kusukela emva kocingo" - ke kusho ukuthi u-Eva wasithatha empilweni. Uneziqu, noma maduzane ngeke umsebenzi omuhle, umyeni okahle, nokunye. Le ntombazane ngeke unezinkinga uyojabula kakhulu. Indoda ibukele njengoba umngane womshado noma umngane zisengwa inkomo - anakekele zebhizinisi. Lokhu kuhle, ngoba ungumthombo engenayo yekwentiwa. Uma kungenjalo, kusazothatha isikhathi bukhoma ngezithukuthuku othandekayo wakhe. Uma evuma, khona-ke akukho lutho olubi ngephupho. Buka njengoba zizosengwa uthatha isitha - ukuba afiphale, elinye - ukuba ubambisane, okuzokwenza ukuthi baphumelele kakhulu ngomqondo wezinto ezibonakalayo. Owesifazane ukubonwa ambheke njengembangi kuye uya asuse Inkomazi ubisi - ukuze umbuso. Ukube ubukwazi ukushayela kude isilwane jade, londoloza ubuhlobo. Le ntombazane wabonakala iphupho uthembisa inkomo nezinyane kwezitshalo. Sekuzoba uzindla replenishment umndeni, uma ushadile.
Umthelela zizosengwa izindawo ukulala okulotshiweyo
Lapho embonweni wasebusuku ukuxazulula, khumbula umongo lapho benakekela izinkomo. Uma inqubo zizosengwa senzeka ehlanzekile esibayeni - inzuzo ijabule. Konke singcolile - ukuze ukunganeliseki sezimali. Zibandakanye zisengwa ku langa, edlelweni elihle, phakathi kotshani - kusho ukufeza ezingeni inhlalakahle, okwase kuyisikhathi eside ngiphupha. Uma lina noma iqhwa - inzuzo uzothola isimanga. A Sound Okuduma - a legacy lila! Ezingaphezu kuka bajabule. Ubisi inkomo endaweni engafanele - ukwenza an amazing, ezingalindelekile uqobo, kodwa yinto enhle kakhulu ukuyenza. Uma dream behleka wena - uzokwazi ukubhekana ngokuphumelelayo yobutha evimbela nokuqalisa wamathalenta. Zisengwa izinkomo ezimweni kumnandi, isibonelo, emkhathini, kwenye iplanethi - kuya ithuba Amazing ukuphila. Wayebona ukulala ngemuva gxuma ezifana ngosuku olulodwa ashade nomuntu oligarch, indoda - ukundiza emazweni akude futhi sithole le ngcebo khona. Kuzoba yinto ngokuphelele ezingalindelekile, futhi uthola esicebile njengoba uCroesus.
Kungani dream of a mermaid? oneiromancy
Ukuchwensa - Iyini? Igama elithi "ukuchwensa"
Umuthi 'Likopid "izingane: ukubuyekezwa odokotela nabazali